Deetaan kamiyyuu Faayilii kuusdeetaa irraa LibreOffice tti galmaa'uu ni danda'a. Galmeessuu jechuun LibreOffice bakka deetaan itti argamu, akkamitti akka qindaa'u, deetaa sana akkamitti argachuun akka danda'amu, fi kan biroo himuu jechuudha. Kuusdeetaan takkaa erga galmaa'ee, ajaja baafataa Mul'annoo - Madda deetaa galmeewwanii fi wardiiwwan barruu kee irraa kuusaawwan deetaa gahinsa gochuuf fayyadamuu ni dandeessa.
Faayilii kuusdeetaa jiraataa galmeessuu:
Haaraa cuqaasiitii faayilicha kuusdeetaa filadhu.
LibreOffice irraa kuusdeetaa galmaa'e haquu.
Faayilicha kuusdeetaa filiitii Haqi cuqaasi.
Title is: Kuusdeetaa Galmeessuu fi Haquu